BUDDHIST TERMS' Dictionary: NOBLE ONE ENDOWED WITH THREE KNOWLEDGES - တေ၀ိဇ္ဇပတ္တ
NOBLE ONE ENDOWED WITH THREE KNOWLEDGES - တေ၀ိဇ္ဇပတ္တ
NOBLE ONE ENDOWED WITH THREE KNOWLEDGES Tevijjapatta
တေ၀ိဇ္ဇပတ္တ - ၀ိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူ။
(၁) လွန်ခဲ့ပြီးသော ဘ၀ဟောင်းတို့ကို ပြန်ပြောင်း၍ ဆင်ခြင်နိုင်သော ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိ ဉာဏ်ပညာ၊
(၂) နတ်မျက်စိကဲ့သို့ အဆင်းအာရုံအမျိုးမျိုးကို မြင်နိုင်သော ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ပညာ၊
(၃) အာသဝေါတရား လေးပါးကို ကုန်ခန်းစေနိုင်သော အာသ၀က္ခယဉာဏ်ပညာ - ဟူသော ဤဉာဏ်ပညာသုံးပါးကို ၀ိဇ္ဇာသုံးပါးဟု ခေါ်သည်။
1. Knowledge of recollecting former existences, pubbenivᾱsᾱnussati ñᾱṇa;
2. Knowledge consisting in supernormal vision like that of celestial beings, dibbacakkhu ñᾱṇa;
3. Knowledge that extinguishes all moral intoxicants, ᾱsavakkhaya ñᾱṇa.
These three Knowledge are called Tevijja, and an Arahat is called one endowed with Tevijja.